Wasiirka Caafimaadka Puntland oo xariga ka jaray Isbitaalka lagu daweynayo TB-da nuuca u adkaysata daawada. | puntlandi.com
Wasiirka Caafimaadka Puntland oo xariga ka jaray Isbitaalka lagu daweynayo TB-da nuuca u adkaysata daawada.
Wasiirka wasaaradda Caafimaadka dpwladda Puntland ayaa furay Isbitaal lagu daweyn doono dadka qaba cudurka Qaaxada gaar ahaan nuuca iska caabisa daawada ee loo yaqaano MDR TB.
Waa isbitaalkii 3-aad oo laga hirgaliyo Soomaaliya , horay waxay ugu yaaleen magaalooyinka Hargaysa iyo Muqdisho oo dadka reer Puntland aadi jireen.
Dr Cali Xasan oo ah madaxa Qaaxada wasaaradda Caafimaadka ayaa ka sheekeeyey baahida keentay in xaruntaan laga furo Gaalkacyo, isagoo tilmaamay in baaritaan ay sameeyeen iyaga iyo WHO 2010 ay ku ogoodeen inay bateen tirada dadka qaba Fayraska nuucaan ah, iyagoo qabana ay daawo u raadsan jireen Hargaysa iyo Muqdisho .
Cali Xasan ayaa codsi udiray dhakhaatiirta Caafimaadka oo ah qofkii ay ka heleen Xanuunka TB-da aysan dawo isaga qorin ee ay usoo diraan xarumaha lagu daweeyo dadka qaba xanuunkaas.
Madax ka socotay Ha’yadda WHO iyo World Vision ayaa sheegay in wasaaradda caafimaadka Puntland ku garab taagan yihiin sidii xanuunkaas loo xakamayn lahaa.
Maamulka gobolka Mudug iyo kan degmada oo kasoo qayb galay furitaan Isbitaalka ayaa wasaaradda caafimaadka uga mahadceliyey Isbitaalkan oo ay sheegeen in baahi weyn ay shacabka Puntland u qabaan iyo guud ahaan gobolada kale Soomaaliya.
Wasiirka Caafimaadka Puntland Cabdinaasir Cuuke ayaa xariga ka jaray Isbitaalka isagoo sheegay in Isbitaalkan uu dabo joogo MHC laga furay Xaar xaar iyo Buurtinle , iyo dhismaha Isbitaalka Xarfo oo socda.
Cuuke ayaa shacabka iyo dowladda u jeediyey inay Isbitaalkan ilaashadaan oo ah Isbitaalkii 3 aad oo noociisa ah oo laga furo Soomaaliya.